🥇 ▷ Sida loo diro feylasha khadka tooska ah adigoon gacantu soo dejin ✅
Sida loo diro feylasha khadka tooska ah adigoon gacantu soo dejin
– Xayeysiis –
Waxaan hubaa inay jiraan marar badan oo maalin ah markaad u baahan tahay inaad u dirto dukumiintiyo, sawirro, fiidiyooyo ama waxyaabo kale oo la xiriira asxaabtaada ama asxaabtaada emayl, WhatsApp Web ama adeegyo kale oo aad ku kalsoon tahay. Haddii aan ka helno alaabada qaar internetka oo aan u baahanahay inaan dirno, waxaan samaynaa waxa ugu fudud. Waxaan si fudud u soo dejineynaa feylkaaga kumbuyuutarkaaga oo aan ku dhejineynaa adigoo booqanaya websaydhka ama furitaanka arjiga, sidaa darteedna aan ugu dirno internetka. Laakiin badanaaba waxaan ilaawinaa inaan tirtirno feylasha mana ahan wax micno leh illaa iyo inta aanan u baahneyn inaan u direyno faylka isku xigxiga.
Laakiin mararka qaarkood waxaan u baahan nahay inaan dirno tiro ka mid ah faylal isku xigxiga oo haddii faylka uusan la imaanin magaca saxda ah, waxaan ku wareersan karnaa faylasha la diri doono iyo kan aan ahayn. Aynu daacad noqonno halkan! Waqtigaas, marka aan ubaahanahay inaan qabano shaqo badan, waxaan dareemeynaa waqti lumis ah oo aan ku badalno magacyada feylasha shaqsiyeed markii aan keyneyno ama aan soo dejineyno. Si kastaba ha noqotee, haddii sababta kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad soo dejiso feyl ay tahay inaad internetka ugu dirto, waxaa jira xal fudud oo kaa caawin kara inaad si toos ah ugu dirto feylka adoo aan kombiyuutarkaaga soo dejisan. Markaa waad dirankartaa feylasha markii loo baahdo iyo qofkasta oo aan sameynin, iyo maxaa yeelay waxaad ugu soo dejisan kombuyuutarkaaga, weligaa ma wajihi doontid jahwareer isla mar kale.
Marka, iyada oo aan dib loo dhigin, aan ku bilowno xalka.
Sida loo diro feylasha adigoon kala soo dejisan kombuyutarka
Tallaabada 1: Aan tixgeliyo inaad rabto inaad email ugu dirto faylka sawirka mid ka mid ah saaxiibbadaa. Sababta oo ah sawirro ayaa laga heli karaa internetka, howshaada ugu horreysa ayaa ah inaad faylasha sawirrada ku furto biraawsarkaaga kombuyutarkaaga. Waxaad adeegsan kartaa mid ka mid ah bog furayaasha internetka ee aad ugu jeceshahay, mid walbana waa inuu sifiican u shaqeeyaa.
Tallaabada 2: Ka dib markii aad ku furto masawirka bogga kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka, nuqul xiriiriyaha faylka sawir ee aad ka heli karto barta cinwaanka ama Omnibox haddii aad isticmaaleyso Google Chrome.
Tallaabo 3: Hadda, guji batoonka lifaaqa ama badhanka la xiriira, kaas oo kaa caawin doona inaad ku dhejiso sawirro ama faylal kale. Waxay kuxirantahay adeega aad isticmaaleyso, hanaanka loogu talagalay ku xirida faylasha ayaa laga yaabaa inay kala duwanaan karaan. Laakiin kaliya waxaad ubaahantahay inaad furi karto xulashadaas, taasoo kaa caawin karta inaad ku dhejiso feylka khad toos ah si aad internetka ugu dirto.
Tallaabo 4: Halkii aad ka dhex marin lahayd nidaamka faylkaaga maxalliga ah, si fudud ugu dheji URL-ka ama isku-xirka sawirka ama faylka kale ee aad soo guurisay, booska, oo aad damacsan tahay inaad ku qorto magaca faylka. Taas ka dib, guji ikhtiyaarka furan ama ku lifaaq xulashada, midkee ayaa quseeya adeegga aad isticmaaleysid.
Tallaabo 5: Waxay kuxirantahay cabirka faylka, waxay qaadan kartaa waqti waxaana biraawsarka websaydhka ama arjiga aad isticmaaleysaa laga yaabo inuu xoogaa qaboojiyo. Kaliya waa inaad sugtaa ilaa waqtigu ka soo kabanayo. Marka dib loo soo celiyo, faylka meeshuu ku socdo ayaa si otomaatig ah loogu lifaaqi doonaa oo waxaad hadda ugu diri kartaa khadka tooska ah adigoo adeegsanaya dalabka aad isticmaaleyso.
Sidan, waad u diri kartaa faylal fara badan adigoon la soo dejisan kombuyuutarkaaga maxalliga ah tanina waa mid waxtar leh haddii aad u soo dirto faylal fara badan waqti ka waqti, iyo inta badan iloobin inaad tirtirto faylashaas ka dib marka aad dirto. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan u dirin feylasha sidan, waxaa jira dhowr qodob oo ay tahay in la xasuusto. Qodobka ugu horeeya ee la xasuusto waa inuusan file aheyn oo aan lagabilaabaynin kumbuyuutarkaaga. Dhamaan faylasha aad u dirto qaabkan waxaa loo soo dejisan doonaa galka ku meel gaarka ah oo xitaa waad arki kartaa faylasha gadaal ka dib markii la diray. Marka ha iga fileynin inaan keydiyo xayiraadda adoo u diraya feylasha sidan. Waxay si fudud u marta geedi socodka soo dejinta feylasha kumbuyuutarkaaga.
Dhammaan feylasha maxalliga ah ee aad isku daydid inaad sidan u dirto waxaa lagu keydin doonaa meesha soo socota.
C: Adeegsadayaasha Maxalliga ah ee loo yaqaan ‘Local LocalDDD’ Windows INetCache IE 2C0XBHFY
Waad iskaga baabiin kartaa waxa ku jira galkaan adoo adeegsanaya. Ka badan ‘2C0XBHFY’Galka ayaa waliba lahaan kara magac kale oo kiiskaaga ah. Feylka lama arki doono, waa inaad dhejisaa isku xirka ku habboon ee Windows Explorer si aad u furto. Si aad u hesho xiriiriyaha dhabta ah si aad u tirtirto waxa ku jira faylka, kaliya dhagsii ikhtiyaarka si aad ugu dhejiso faylka waxayna ku degi doontaa si caadi ah faylka soo socda. Kaliya koobi isku xirka halkaas.
Sidaan horayba u idhi, kumbuyuutarkaagu wuxuu umuuqdaa inuu barafoobay in muddo ah, tani waxay dhacdaa sababtoo ah kumbuyuutarkaagu wuxuu faylka ku soo dejinayaa fayl ku meel gaar ah ka hor intarneedka. Markaa haddii aad isku daydid inaad dirto file weyn sidoo kale waxaa lagusoo dejinayaa kombuyuutarkaaga kahor intaanad dirin, waana taas marka kombiyuutarkaagu xoreeyo goorta la soo dejinayo. Marka anigu kugula talin maayo inaad sidan u sameyso feylasha waaweeyn maadaama ay khalkhal galin karto haddii xiriiriyahaaga internet uusan shaqeynin ama aad leedahay xiriir xun oo internet-ka aad u xun ama aad u gaabis ah.
In kasta oo aadan keydin karin xayiraadda adoo u diraya feylasha sidan, runti waxay noqon kartaa wax faa’iido leh haddii aad u dirto feylasha waqti ka waqti adigoo u soo dejinaya kombuyuutarkaaga, mana damacsan tahay inaad ku ballaariso baahiyahaaga. Waan hubaa in tani ay kordhin doonto wax soo saarkaaga si kasta oo ay tahay. Waxa kaliya ee ay tahay inaad ogaato inaad u dirto feylasha sidan waa inaad ka hesho xiriiriyaha feylka ee internetka. Ka dib markii aad soo ceshano xiriirinta faylka kasta, waxaad si fudud ugu diri kartaa qaabkan adigoon dhibaato ku qabin.
Marka, tani waa sida aad ugu diri karto feylasha kombiyuutarkaaga adigoon gacantaada soo dejin. Su’aal baad qabtaa. Xor baad u tahay inaad faallo ka bixiso isla hoosta.